ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): မြန်မာဘလော့ခ်များ
အဲဒီစာသားတွေကိုဖတ်ပြီး ခေါင်းပါတွင်တွင်ခါမိတယ်…. လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ်ရေးတဲ့ ဘလော့ခ်တစ်ခုကို ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ချင်ကြတယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့ခ်ကို သူများနဲ့မတူအောင် လိုက်ထွင်ချင်ကြမှာပဲ.. အရုပ်လှလှတွေကပ်မယ်.. နောက်ခံကောင်းကောင်းရှာမယ်… လှသလို အလှဆုံးဖြစ်အောင် မလုပ်ချင်သူ မရှိပါဘူး… ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ဆိုတာ လုပ်ချင်တိုင်းသာလုပ်ခွင့်ရရင် အခက်ခဲဆိုတာ ဘယ်မှာလည်း.. စိတ်ကူးထဲမှာရှိပေမယ့် လက်က မလုပ်တတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း.. ဥပမာ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြန်ပေးပါ့မယ်.. လင်းလက်စာပဲရေးတတ်တယ်.. အခုချိန်ထိ ဘလော့ခ်က ဘာမှမပြင်တတ်ဘူး.. တုံးလွန်းလို့ပါ.. ငယ်ငယ်ကတည်းက အင်တာနက်ဆိုတာ အလုံးလား အပြားလား မြန်မာပြည်က သင်မှမသင်ပေးလိုက်တာ.. အဲဒီတော့လည်း အပြင်ရောက်မှ ပေါပေါသုံးနိုင်တယ်.. ရန်ကုန်အင်တာနက်နဲ့က အဆင်မှမပြေတာ.. အခုတိုင်းသာသုံးရရင် မွဲကိန်းပဲ… ကိုယ့်ဆိုဒ်ကိုယ် အားလုံး အကောင်းဆုံး သူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ချင်ကြပါတယ်… မလုပ်တတ်သေးတော့ ဒိလိုပဲ သိသူလုပ်တာ အကူညီတောင်း အရင်ဆုံးသုံးရတာပေါ့.. ဒါဟာ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ပါ.. ငါလုပ်လို့ မင်းလျှောက်မလုပ်ရဘူးဟိတ်ကောင်လို့ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေစည်းမျဉ်း ဘယ်နေရာမှာလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ယူလာပေးကြပါ………..
ညီမရေ .. ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ်ဘူး ပရိုဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေက အဲလိုပဲ ... ဟားဟား
ဒါနဲ့ ဘလော့လုပ်တာ လိုတာရှိရင်ပြောပါ အစ်ကိုလုပ်တတ်တာဆိုရင် ကူညီပေးပါ့မယ် :)
Let it be. freedom is inside urself. you don't need to beagenius in blog designing, you just need to be lin let :)
မခံချင်စိတ်တစ်ခုက လင်းလက်ကို စာချက်ချင်းရေးအောင် ပြန်လုပ်လိုက်တာပါ အကိုသန့်ဇင် ... အဲဒီအကြောင်းသိသိချင်း စိတ်နဲနဲတိုသွားတာနဲ့ စာချက်ချင်းပြန်ရေးတာ ဟိး
nice, hot and shot.. You are right.. I like your sample way of thinking and direct writing.. really cool.. Keep it up..
By the way.. your wedding photos are beautiful.
Theint Mar Lwin